ရှေးတရုတ်တို့၏ တီထွင်မှုကြီး ၄ ရပ်
ကမ္ဘာ့ဩဇာအကြီးမားဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် (၁၀၀)
ဂီရိဂျာ ပရာဆတ် ကွိုင်ရာလာ
ဟော့စတက်ဒ် ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဒိုင်မန်းရှင်း သီအိုရီ
နိမိတ် ဟူသည် ကောင်းမည်၊ ဆိုးမည်၊ ဖြစ်မည်၊ ပျက်မည် စသည်တို့ကို ကြိုတင်သိစေနိုင်သော အကြောင်းအမှတ်၊ လက္ခဏာဟူ၍ မြန်မာအဘိဓာန် အကျဉ်းချုပ်တွင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါသည်။ ဆရာကြီး ဟံသာဝတီဦးဘရင်က နိမိတ္တဟူသော ပါဠိဘာသာမှ ဆင်းသက်လာပြီး ဖြစ်လတ္တံ့သော အနာဂတ်အရေး ...
မြင့်မြတ်သော အခင်းနေရာ ဖြစ်သည်။ ကျမ်းဂန်များတွင် ပလ္လင် ပါးရှိကြောင်း ပြဆိုကြသည်။ ၎င်းတို့မှာ မြတ်စွာဘုရား ပွင့်တော်မူရာ အပရာဇိတ ပလ္လင် နတ်မင်းတို့ ထိုင်သော ဒိဗ္ဗာသန ပလ္လင် တရားသူကြီးတို့ ထိုင်သော အင်္တကရန ပလ္လင် ဗြဟ္မာမင်းတို့ ထိုင်သော ကမ္မလာသနခ ...
လူတို့တွင် အမျိုးလေးပါး ရှိသည့်အနက် ပုဏ္ဏားသည် တစ်မျိုး အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာဦး အစက လူတစ်မျိုးတည်း ရှိရာမှ ဥက္ကဋ္ဌဇာတိ အမြတ်မျိုးနှင့် ဟိနဇာတိ အယုတ်မျိုးဟူ၍ နှစ်မျိုး ကွဲလာ၏။ ထိုနှစ်မျိုးမှ တဖန် ခတ္တိယဂေါတ္တ ခေါ် မင်းမျိုး ၊ ဗြဟ္မဏ ဂေါတ္တ ခေါ် ပ ...
လူမှုဗေဒတွင် ပစ်ပယ်ထားခြင်းသည် အပယ်ခံဖြစ်လာစေသည့် သို့မဟုတ် အပယ်ခံဖြစ်စေသည့် လူမှုဖြစ်စဉ် ၊" ပစ်ပယ်ခံ နိမ့်ကျသောလူတန်းစား”၊" အပယ်ခံစာပေ” နှင့် အခြားသောအရာများသည် ဥပမာများဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အစွန်းအရောက်ဆုံးပုံစံတွင်၊ ပစ်ပယ်ထားခြင်းသည် လူအုပ်စုကို လုံးဝ ...
ပန့်ခ် ယဉ်ကျေးမှု ဆိုတာဟာ ပန့်ခ်ရော့ခ်ဂီတအပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ပုံစံကွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပန့်ခ်လှုပ်ရှားမှုဟာ ၁၉၇ဝ ခုနှစ် အလယ်ပိုင်းကနေ နှောင်းပိုင်းတဝိုက် ဗြိတိန်၊ အမေရိကားနဲ့ ဩစတြေးလျက ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့ ရော့ခ်အင်ရိုးလ် ဂီတရပ်ဝန်းကနေ စတင ...
ပန်းတဉ်းဟူသည် ကြေးထည် ပုံစံအမျိုးမျိုး သွန်းလုပ်သည့် ပညာဖြစ်သည်။ ဗဒင်းဟု ဆိုကြသော်လည်း ရေးရာတွင် ပန်းတဉ်းဟူ၍ ပန်းထည့်ပြီး တလေးတစား ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲကြသော ရှေးမြန်မာ လက်မှုပညာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ လူတို့သည် အစဦးတွင် ကျောက်လက်နက် ကိရိယာများကို ကိုယ်တိုင်ပ ...
ပုည = ကောင်းမှု ၊ ကြိယ = ပြုထိုက်သော ၊ ဝတ္ထု = စီးပွားချမ်းသာ၏ တည်ရာ ။ စီးပွားချမ်းသာ နောင်သံသရာကျိုး၏ တည်ရာဖြစ်၍ စင်စစ် ပြုထိုက်သော ကုသိုလ်ကောင်းမှု ဒိဌိဇုကမ္မ = အယူကို ဖြောင့်မှန်စွာ ယူမှု ကံ ၊ ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်မှု ဓမ္မသဝန = တရားစကားကို နားထ ...
ပြဿဒါး ဟူသည် အနက်အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့် ပျက်စီးခြင်းဖြစ်၏။ ပြဿဒါးဟူသော အရေးအသားသည် အနက်အဓိပ္ပါယ်မရှိဟု ယဉ်ကျေးမှုဌာန ညွှန်ကြားရေး ဝန်ဟောင်း ဦးသာမြတ် ရေးသားအပ်သော မြန်မာစာလုံးပေါင်း အဘိဓာန်ချုပ်ခေါ် မြန်မာစာရေးထုံးကျမ်း စာမျက်နှာ ၂၃၈ တွင် အောက်ပါအတိုင် ...
တောနေရသေ့က မွေးစားထားသော မိန်းကလေး။ သမင်မနို့ရည်ကို တိုက်ကျွေးကာ ကြီးပြင်းလာသည်မှ ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန်ယုံကြည်မှု။ တောနေရသေ့၏ကျင်ငယ်ရေကိုလာသောက်လေ့ရှိသော သမင်မကမွေးသည့် လူသားစင်စစ်မိန်းကလေးဟုသာဆိုကြပါသည်။ ရသေ့ကမွေးစားထားပြီး အဓိဋ္ဌာန်ပြု၍ လက်ညှိုးမှ နို့ ...
ဘက်စကတ်ဘော ကစားခြင်း ဘက်စကတ်ဘော ကစားခြင်းသည် ဘောလုံးကို လက်ဖြင့်ပုတ်၍သော် လည်းကောင်း၊ ပစ်၍သော်လည်းကောင်း ဂိုးသွင်းကာ အဖွဲ့နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကစားရသည့် ကစားနည်း ဖြစ်သည်။ ကစားရုံတွင်း၌ဖြစ်စေ၊ ကွင်းပြင်၌ဖြစ်စေ ကစားနိုင်သော ကစားနည်းမျိုးလည်း ဖြစ်သည်။ သံ ...
ဘိသိက် မင်္ဂလာဆိုသည်မှာ အဘိသေက မင်္ဂလာ ဟူသော ပါဠိဘာသာမှ ဆင်းသက်လာ၍ ဦးထိပ်၌ ရေသွန်းခြင်း မင်္ဂလာဟု အဓိပ္ပါယ် ရသည်။ ကျမ်းဂန် ထုံးတမ်းနှင့်အညီ ဦးထိပ်၌ ရေသွန်း၍ မင်္ဂလာယူခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာမင်း အုပ်ချုပ်ပုံ စာတမ်းတွင် ဘိသိက်မင်္ဂလာ ၁၅ မျိုးရှိကြောင ...
မင်းကျင့်တရား ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေသော မင်းများသည် သားတော်အစဉ် မြေးတော်အဆက် မြစ်တော်အညွန့် အဓွန့်ရှည်အောင် စိုးအုပ်ခွင့်ရရန် ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ကို ခေါ်ပါသည်။ မင်းကျင့်တရား ပါးရှိပါသည်။ ရှစ်ပါးသီလ ဆောက်တည်ခြင်း သည်းခံခြင်း အမျက်မထွက်ခြင ...
မနုဿီဟ ဆိုသည်မှာ ရှေးက အကယ်ရှိခဲ့ဖူးသော သတ္တဝါတစ်မျိုး မဟုတ်ချေ။ ရှေးခေတ်က လူများ စိတ်ကူးဉာဏ် ဆန်းကြယ်စွာ တီထွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော တိရစ္ဆာန် ကိုယ်တစ်ပိုင်း လူကိုယ်တစ်ပိုင်း အရုပ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ယင်းကို မြန်မာနိုင်ငံ အချို့သော စေတီပုထိုးများတွင် တွေ့ရသ ...
မြို့ရိုး ။ ။ ဗုံး အမြောက်စသည့် လက်နက်ဆန်းများ မပေါ်မီခေတ်က ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်တွင် မြို့လုံခြုံမှုအတွက် မြို့ကို ဝန်းပတ် ကာရံထား သော မြို့ရိုးများကို ဆောက်လုပ်လေ့ရှိကြသည်။ ရှေးအကျဆုံး မြို့ရိုးမှာ ဆူးဖြင့် ခတ်ထားသည့် မြို့ရိုးမျိုးဖြစ်၏။ အယ်လက်ဇန္ဒာ ဘ ...
ယဉ်ကျေးမှုများ ပေါင်းစည်းနေထိုင်ခြင်း ဟူသည် သတ်မှတ်ထားသော နေရာတစ်ခု အများအားဖြင့် အဖွဲ့အစည်းအဆင့် ဥပမာ- ကျောင်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အိမ်နီးနားဝန်းကျင်များ၊ မြို့များ သို့မဟုတ် နိုင်ငံများ တွင် ဒေသတစ်ခုတွင်း မွေးဖွား၊ နေထိုင်၊ သေဆုံးခြင်း ...
မြန်မာလူမျိုးတို့တွင် ရှေးထုံးကိုလည်း မပယ်နှင့်၊ ဈေးသုံးကိုလည်း မကြွယ်နှင့် ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ကို လက်ကိုင်ပြု၍ အမှားအမှန်ကို မဆင်ခြင် မတိုင်းဆဘဲ၊ ရှေးအယူအဆများ ကို ယနေ့တိုင် တစ်သဝေမတိမ်း လက်ခံကျင့်သုံးသူ အများအပြား ရှိသေးသည်။ မြတ်စွာဘုရားသခင်ကပင် မိ ...
ရုပ်ရှင်ဟူသည် `သတ္တဝါ၊ ရှုခင်း စသည်တို့၏ လှုပ်ရှားပုံများကို မီးရောင်အားဖြင့် ပိတ်ကားနံရံ စသည်ပေါ်၌ အရိပ်ပုံများ တဆက်တည်း ပေါ်ထင်အောင် ပြသခြင်း၊ ယင်းလုပ်ငန်း အတတ်ပညာ၊ ´ဟု မြန်မာအဘိဓာန် တွင် ဖော်ပြထားပြီး မြန်မာစွယ်စုံကျမ်း တွင်မူ ရုပ်ရှင် ဟူသည်မှ ...
ရှောင်လင်ကျောင်းတော် ရှောင်လင်ဘုရားကျောင်း သည် ယခု တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဟန်နန် ပြည်နယ် ဆောန်ရှန်း တောင်တန်း ပေါ်တွင် တည်ရှိသော ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ရှောင်လင်ကျောင်းတော်ကို ဧကရာဇ်ရှောင်ဝမ် က အေဒီ ၄၇၇ တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ...
လက်ထပ်ခြင်း သည် လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ အယူစွဲမှု သို့မဟုတ် တရားဥပဒေ အတိုင်း လူပုဂ္ဂိုလ်များ အတူတကွ ပေါင်းသင်းနေထိုင်ရန် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းပေါင်းစပ်မှုကို ထိမ်းမြားခြင်း ဟုလည်းခေါ်ပြီး အစပိုင်းကို မင်္ဂလာဆောင်ပွဲ များဖြင့် အသိအမှတ်ပြုလေ့ရှိသည ...
လမ်း၌ ယဉ်ကျေးခြင်း သည် ယဉ်ကျေးမှုအရပ်ရပ်ထဲမှ တစ်ချက်အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ လမ်း၌ ယဉ်ကျေးခြင်းတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် မျိုးရှိသည်။ ထို မျိုးမှာ - အမှိုက်၊ စက္ကူစုတ်စသည်တို့ကို လမ်းမပေါ်တွင် တွေ့ရှိပါက ဖယ်ရှားပစ်ရာ၏။ တစ်ဦးတစ်ယောက် မတော်တဆ ထိခိုက်မိ၍ဖြစ်စေ အခြ ...
လုံချည် သည် အဝတ်တစ်စ ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဝတ်ဆင်ကြသည်။ လုံချည်သည် ၂ မီတာ ခန့်ရှည်ပြီး ၈၀ စင်တီမီတာ ခန့် ကျယ်သည်။ အစကို ပုံမှန်အားဖြင့် ဆလင်ဒါပုံစံဖြစ်အောင် ကွင်းလုံး ချုပ်ထားသည်။ ၎င်းကို ခါးပတ်ဝန်းကျင်မှ ခြေမျက်စေ့ နားအထိ ...
လူခြောက်-ဟူသည် ဘုံဘဝတမျိုးမှ သတ္တဝါမဟုတ်ပါ၊ ခန္ဓာငါးပါးရှိသည့် လူ့ဘဝ၌ပင် ဇလာဗုဇ ပဋိသန္ဓေနေကြသူများ ဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓစာပေအရဆိုသော် ပထမံ ကလလံ သောတိ၊ ကလလာ ဟောတိ အဗ္ဗုဒံ၊ စသော သံယုတ်ပါဠိတော်လာအတိုင်း အမြှုပ် တစ်သတ္တာဟ။ ဦးခေါင်း ခြေလက် ခက်မငါးဖြာ တစ်သတ ...
လူးတဆဲ့နှစ်ပန္နား ကို ကျိုင်းရုံးကြီး တဆဲ့ပန္နားဟုလည်းခေါ်၏။ ထို့ပြင် ရှမ်းဘာသာ၌ ရာ့စစ်ပ်ဆောင်ပနာ ဟု လည်းခေါ်ဝေါ်သေးသည်။ ယခု တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းရှိ ချေလီနယ်ဖြစ်သည်။ ကျိုင်းရုံးကြီးတဆဲ့နှစ်ပန္နားဟူရာ ၌ ကျိုင်းရုံးကြီးဆိုသည်မှာ မြို့မ၏အမည်ဖြစ်သည်။ ယ ...
လောင်းကစားဆိုသည်မှာ "ငွေ ကိုဖြစ်စေ၊ အခြားတစ်ခုခုကို ဖြစ်စေ တန်ဖိုးထပ်၍ မသေချာ မရေရာမှု တစ်ခုကို အရဲစွန့်ပြုလုပ်ခြင်း" ဟု အနောက်နိုင်ငံ စွယ်စုံကျမ်းတစ်ခုတွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ တစ်နည်း အားဖြင့် ကံကိုယုံပြီး အချို့တစ်ဝက်ကို ဖြစ်စေ၊ အားလုံးက ...
ဝလျှင်ပျော့သောအထည်များကိုဝတ်ဆင်၍ ပိန်လျှင်မာထူသောအထည်များကိုဝတ်ပါ။အရပ်ရှည်လွန်းသူတို့မှာ မတ်တတ်စင်းလုံချည်မဝတ်ရ။ ပုလွန်းသူကား ကန့်လန့်စင်းလုံချည်ကိုမဝတ်ရ။ မိုးရာသီတွင် အဝါရင့် ၊ အစိမ်းရင့် ၊ ခရမ်းစသော တောက်ပသောအရောင်အထည်များကို အသုံးပြု၍ နွေရာသီတ ...
ဝိဇ္ဇာဓိုရ်ဆိုတာ ဝိဇ္ဇာ+ဓရ ဆိုသည့် ပါဠိပုဒ်ကနေ ဆင်းသက်လာသည်။ ဝိဇ္ဇာဆိုသော ပုဒ်က အတတ်ပညာ အတတ်ငယ် ၆၄ ပါး အသိပညာ အတတ်ကြီး ၁၈ ပါး ဗေဒင်သုံးပုံ ပု- ဒိ -အာ ဆိုတဲ့ ဝိဇ္ဇာသုံးပါးကို ဟောသည်။
သည်းခံခြင်း Patience forbearing သည် မင်္ဂလသုတ် တွင် ပါဝင်သည်။ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား သတ္တဝါအားလုံးတို့အား ချမ်းသာကိုပေးတတ်သော မင်္ဂလာတရားဖြစ်သည်။ သည်းခံခြင်း တရားသည် ကမ္ဘာ့ မင်္ဂလာတရား ဖြစ်သည်။ မင်္ဂလသုတ် မြန်မာပြန်တွင်" အို. နတ်သား. သည်းခံတတ်ခြင်း ၊ သ ...
သူရဿတီ သည် ပညာရေး၊ ဂီတနှင့် အနုပညာနာယကလုပ်သော ဟိန္ဒူဘာသာနတ်ဒေဝီဖြစ်သည်။ သူရဿတီသည် ဗြဟ္မာနတ်ဒေဝ၏ မိဖုရားဖြစ်သည်။ သူရဿတီ ဟူသောအမည်မှာ သက္ကတဘာသာ စကား၊ သရသွတိ ကိုပါဠိမှပြန်ကာ မြန်မာအသံဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ထားသော အမည် ဖြစ်သည်။ သက္ကတပုဒ်သရကို သရသ်နှင့်ဝတိဟူ၍ ...
ဟင်္သာကို မြန်မာနိုင်ငံ၌ မြင်ဖူးသူ နည်းကောင်း နည်းမည်ဖြစ်သော်လည်း ကြားဖူးသူကား များပေသည်။ ဟင်္သာသည် အလျား ၂၅ လက်မခန့်ရှိသည်။ အတောင်တွင် အနက်ပြောက်ကလေးများနှင့် အဖြူ ကွက်များရှိရာ ယင်းတို့ကို နားနေချိန်၌ မမြင်နိုင်၊ ပျံသောအခါတွင်မှ မြင်နိုင်လေသည်။ ...
အဆောင်အယောင်ဟူသောစကားသည် အနက်အဓိပ္ပါယ် ကျယ်ဝန်းလှ၏။ သုသော ဓိတ မဟာရာဇဝင်တော်ကြီး၌ သိကြားမင်းသည် သိလဝံသထား အစရှိသော မင်းမြှောက်တန်ဆာ ငါးပါးကို၎င်း၊ မင်းဧကရာဇ်တို့ နှင့် ထိုက်တန်သော အဆောင်အယောင် အခမ်းအနားကို၎င်း ဒွတ္တဘောင်မင်းကြီးအား ဆောင်နှင်းပေ၏ ဟ ...
အဋ္ဌာရသ ၁၈ ရပ်
တစ်ဆယ့်ရှစ်ရပ်သော အတတ်ပညာမျိုး ကို ရှေးခေတ်၌ ယောက်ျားတို့ တတ်အပ်သော အတတ်ဟု ကျမ်းများက ပြဆိုသည်။ ယောက်ျားတို့ အတတ် ရပ်လည်းဟူ၏၊။ ၎င်း ရပ်သောအတတ်တို့ကို သက္ကဋကျမ်း၌တစ်မျိုး၊ မိလိန္ဒပဉှာပါဠိတော်၌ တစ်ဖုံ၊ လောကနီတိကျမ်းကတစ်ဖြာ၊ ဤသို့အနည်းနည်းလာရှိကြရာ ...
အထွေထွေ ယဉ်ကျေးခြင်း သည် ယဉ်ကျေးမှုအရပ်ရပ်ထဲမှ တစ်ချက်အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ အထွေထွေ ယဉ်ကျေးခြင်းတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် မျိုးရှိသည်။ ထို မျိုးမှာ - စကားပြောဆိုခြင်းသည် ယဉ်ကျေးဖွယ်ရာသော အမူအရာဖြစ်၍ မိတ်ဆွေပေါများကြောင်း ဖြစ်၏။ လူကြီးလူကောင်း မိကောင်းဖခင် သာ ...
အန်ကစားခြင်း သည် လောင်းတမ်းကစားနည်း တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ လက်ထဲမှသော်လည်းကောင်း၊ အန်စာ ခွက်ထဲမှသော်လည်းကောင်း အန်စာဟုခေါ်သော အတုံးကလေး များကို ပွင့်အန်၍ထွက်အောင် အန်ခတ်ကစားရသောကြောင့် အန်ကစားခြင်းဟုခေါ်ဝေါ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကစားလေ့ ရှိသော အန်ကစား ...
အမေရိကန် အိုင်ဒယ် သည် အမေရိကန် Fox ရုပ်သံဌာနမှ ထုတ်လွှင့်သည့် သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်မှ Pop Idol အစီအစဉ်ကို အတုယူထားပြီး ဂီတပါရမီရှင်များကို ရှာဖွေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ချိန် ...
အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေး ဆိုသည့် ဝေါဟာရသည် အသက်အရွယ်မရွေး အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများအားလုံးတို့၏ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အရာများအား ရည်ညွှန်းသည်။ တစ်ခုသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင် ဥပဒေ၊ ဒေသဆိုင်ရာ ဓလေ့ထုံးစံနှင့် အပြုအမူအားဖြ ...
မြန်မာ့အနုပညာရပ်တွင် အမြိတ်ပန်းထည် ရက်လုပ်ခြင်း အတတ်သည် သီးခြား ထင်ရှားခြင်း မရှိခဲ့သော်လည်း မြန်မာ ရက်ကန်းအတတ်တွင် အမြိတ်ဆင်အချိတ်ဆင်များ၊ ရွှေချည်ထိုး ငွေချည်ထိုး အထည်များသည် အထူးထင်ရှားခဲ့ပေသည်။ မြန်မာ ရက်ကန်းအတတ်တွင် အမြိတ်ကောက်ခြင်း၊ အချိတ်က ...
မြန်မာမင်းများလက်ထက် ကျင့်သုံးခေါ်ဝေါ်သော ဓလေ့ထုံးစံစည်းမျည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ မြန်မာဘုရင်များလက်ထက်တွင် နောင်ဆက်လက်ဆက်ခံမည့် မင်းလောင်းမင်းလျာအဖြစ် လျာထားသတ်မှတ်ခြင်းခံရသူကို ခေါ်ဝေါ်သည်။ အိမ်ရှေ့မင်းအဖြစ် နာမည်အကျော်ကြားခဲ့ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ကုန်းဘ ...
အိမ်၌ ယဉ်ကျေးခြင်း သည် ယဉ်ကျေးမှုအရပ်ရပ်ထဲမှ တစ်ချက်အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ အိမ်၌ ယဉ်ကျေးခြင်းတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် မျိုးရှိသည်။ ထို မျိုးမှာ - လက်ဖက်ရည် ကော်ဖီသောက်သောအခါ အောက်ခံပန်းခံပြားထဲတွင့် ထည့်၍ သောက်ခြင်းသည် မယဉ်ကျေးဟု အချို့က ယူဆကြ၏။ ၎င်းပန်းကန်ပ ...
အိုလံပစ် အားကစားပွဲတော် သည် အပြည်ဆိုင်ဆိုင်ရာမှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့် အားကစားနည်း မျိုးစုံပါဝင်သည့် ကစားပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုလံပစ်အားကစားပွဲအား ကာလအပိုင်းအခြား နှစ်ခုဖြင့်ရှုမြင်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့မှာ ဂရိလူမျိုးတို့၏ မူလပထမရှေးဟောင်း အိုလံပစ်ပ ...
မြေထဲပင်လယ် အရှေ့မြောက်ပိုင်း အီးဂျီးယန်းပင်လယ်အတွင်းရှိ ကျွန်းများသည် ဥရောပတိုက် ယဉ်ကျေးမှု စတင်ပေါက်ပွားရာ ဒေသဖြစ်၍ ထိုဒေသမှတစ်ဆင့် ပြန့်ပွားလာသောယဉ်ကျေးမှုကို အီးဂျီးယန်းယဉ်ကျေးမှုဟုခေါ်သည်။ ထိုကျွန်းများတွင် ကရိ ကျွန်းသည် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ရှ ...
အနောက် အာရှတွင် လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၉၀၀၀ မှ ၅၅ဝဝ အတွင်း ကျောက်ခေတ်သစ် ပေါ်ထွန်း ခဲ့သည်။ မြန်မာ ကျောက်ခေတ်သစ်ဓလေ့ကို လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ၂၁ဝဝ အထိ တွေ့ရှိ နိုင်ပါသေးသည်။ ကျောက်ခေတ်သစ် လက်နက်များကို ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းမှာ တွေ ...
ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့သည် မတ်လ ၂၁ရက်နေ့ ဖြစ်ကြောင်း UNESCO က ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ကြေငြာ ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာ ဆိုင်ရာ ၊ ဒေသန္တရ ဆိုင်ရာ ၊ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကဗျာ လှုပ်ရှားမှုများကို တွန်းအားဖြစ်စေရန် နှင့် အသိမှတ်ပြုစေရန် ဖြစ်ကြောင်း UNESCO ရဲ့ ကြေငြာချက်အရ အဆိုပါနေ ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏မွေးနေ့ကို ကမ္ဘာ့ကလေးများနေ့ဟု သတ်မှတ်ထားသော်လည်း လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်နှင့် စစ်အစိုးရလက်ထက်တစ်လျှောက် အသိအမှတ်ပြု ကျင်းပခြင်းမျိုးမှာ မရှိသလောက်ဖြစ်ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ကို ကမ္ဘာ့ကလေးများနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့ခြင်းမှ ...
ရုပ်ရှင်ဆိုသော အရာတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာစေရန်အောက်ပါအချက်များ လိုအပ်သည်။ ပြစက်မှ ထွက်ပေါ်လာသော အရုပ်များကို လက်ခံပေးပြီး ပရိသတ်ကို ပြသပေးနိုင်သော ပြကွင်း ပိတ်ကား လူ သို့မဟုတ် အရာဝတ္တုတစ်စုံတစ်ရာ၏ လှုပ်ရှားပုံကို အစီအစဉ်လိုက် မှတ်တမ်းတင်နိုင်သောစက် ကင်မ ...
ကဲ့ သို့မဟုတ် ဆဲ့ လူမျိုးသည် အလွန်ရှေးကျ သော လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်၍၊ ခရစ်တော်မပေါ်မီ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကပင် ဥရောပတိုက်အလယ်ပိုင်းနှင့် အနောက်ပိုင်းတွင် နေထိုင် ခဲ့ကြသည်။ ထိုစဉ်က ရောမအင်ပိုင်ယာမှာ မပေါက်ဖွား သေးပေ။ ကဲ့လူမျိုးသည် လွန်စွာစစ်တိုက်ဝါသနာပ ...
ယနေ့လူတို့ ဆင်းသက်ပေါက်ဖွားရာ ဖြစ်သည့်ကာလ တစ်နည်းအားဖြင့် ခေတ်လူသားတို့၏ အစကာလ ဖြစ်သော လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၄၀,၀၀၀ မှ ၂၅,၀၀၀ ကာလအတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသည့် ခေတ်ကို ကျောက်ခေတ်သစ် ပါလီယိုလစ်သစ် ခေတ် ဟု ပညာရှင်တို့က သတ်မှတ်ကြသည်။ ထိုကာလမှ ယနေ့တိုင်ဆင်း ...
ကျောက်ခေတ်ဟောင်း ကာလ ဆိုသည်မှာ သမိုင်း မတင်မီ ကာလ ဖြစ်ပြီး ရှေးအကျဆုံးသော ကျောက်လက်နက် ကိရိယာများ စတင် အသုံးပြုလာကြသည့် အချိန် ဖြစ်သည်။ ကျောက်ခေတ်ဟောင်းကာလကို ဟိုမီးနန်လူ တို့ ကျောက်လက်နက်များကို စတင်အသုံးပြုခဲ့သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂.၆ သန်းခ ...
ကျောက်ခေတ်ဟောင်း ခေတ်လယ် ဆိုသည်မှာ ပေလီယိုလစ်သစ် သို့မဟုတ် ကျောက်ခေတ်ဟောင်း၏ ဒုတိယမြောက် ကာလ အပိုင်းအခြားကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပြီး ဥရောပ၊ အာရှ နှင့် အာဖရိကတို့တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ကျောက်ခေတ်ဟောင်း ခေတ်လယ်သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃ သိန်းမှ နှစ်ပ ...
ကျောက်ခတ်ဟောင်း ခေတ်ဦးကို Lower Palaeolithic ဟုခေါ်ပြီးကျောက်ခေတ်ဟောင်းတွင် အစောဆုံးသော ကာလအပိုင်းအခြားကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ အချိန်ကာလအားဖြင့် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂သန်းခွဲခန့်က ဖြစ်ပြီး လူသားတို့ ကျောက်ဖြင့် ပြုလုပ်သော လက်နက် ကိရိယာများကို ...
ကြီးမားသောသံစဉ်ထွက်ခေါင်းလောင်းကြီးများမှာ အမြင့် ၄ မီတာသာသာ၊ အလေးချိန် တန် ၂၀ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိကြလေ၏။ ထိုခေါင်းလောင်းကြီးများမှာ ကြီးကျယ်လှပခြင်း ဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်ဆောင်ကြလေသည်။
ဟော့စတက်ဒ် ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဒိုင်မန်းရှင် ..